Kooxda Tottenham oo Magaalada London kula kulmaysa Macallinkii hore ee Chelsea si uu bedel ugu noqdo Jose Mourinho – Gool FM
Kooxda Tottenham oo Magaalada London kula kulmaysa Macallinkii hore ee Chelsea si uu bedel ugu noqdo Jose Mourinho
(London) 15 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa la soo warinayaa inay Magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska kula kulmayso Macallin Maurizio Sarri todobaadka soo socda.
Sida ay warinayaan wararka laga helay dalka Talyaaniga, Tottenham ayaa tababarihii hore ee Chelsea, Maurizio Sarri la kulmaysa isbuuca soo socda si ay ula galaan wadahadallo ku aaddan suurto-galnimada uu ku bedeli karo Jose Mourinho.
Mourinho ayaa cadaadis weyn uu saaran yahay kaddib markii kooxda ka dhisan waqooyiga London ay xilli ciyaareed liita ku jirto iyadoo lix dhibcood ka dambeysa booska loogu soo baxo Champions League, waxaana laga reebay Europa League kaddib guuldarro ka soo gaartay Dinamo Zagreb.
Macallin Sarri ayaa koox la’aan ahaa tan iyo markii laga cayriyey Juventus, waxaana wararka laga helayo Talyaaniga ay sheegayaan in todobaadka soo socda ay kulmi donaan Sarri iyo Spurs.
Haatan Jariiradda La Gazzetta dello Sport ayaa warinaya in kooxda Premier League ka dhisan ay doonayso inay wadahadallo ka gasho suurto-galnimada inay kula soo wareegayaan Sarri.
Majaladda reer Talyaani ayaa warbixinteeda intaas ku dartay in kooxda iyo Sarri ay ku kulmi doonaan Magaalada London horraanta todobaadka soo socda, iyadoo Guddoomiyaha Spurs eeDaniel Levy uu miisaamayo xulashadiisa macallinnimo.
Waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in Tottenham ay markii hore xiiseyneysay inay shaqaaleysato Sarri xagaagii 2018, markii uu ka tagay Napoli si uu ugu wareego garoonka Stamford Bridge.
Sarri oo haatan 62-jir ah ayaa la sheegayaa inuu ka warqabo xiisaha Tottenham, maadaama uu ka fikirayo inuu ku soo laabto kursiga laga maamulo kooxaha.
Roma ayaa sidoo kale la sheegay inay xiisaynayso adeegga Sarri, halka la hadal hayo ku laabashada Napoli, maadaama sida la sheegay ay halis ku jirto shaqada Macallin Gennaro Gattuso.
Tababare Sarri waligiis kuma qanacsanayn Chelsea, wuuna ka tagay kaddib xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee uu kooxda maamulo, inkastoo uu kula guuleystay Europa League, isla markaana uu keenay afarta sare ee Premier League.
Wakiil Mino Raiola oo u safray Talyaaniga kaddib markii uu booqday dalalka Spain & England